Thwebula QQ 2.11 International futhi 6.4.12593... – Vessoft
QQ – isofthiwe for umbhalo, izwi kanye nokukhulumisana video. Isofthiwe ikuvumela ukwengeza oxhumana nabo amasha, ukusabalalisa kuzo ngamaqembu, uguqule online-isimo sakho, ukuxhumana kwimodi conference, njll QQ iqukethe ekhethekile App Box module esenza ukugijima imidlalo ehlukene kanye nezinsizakalo. Isofthiwe ikuvumela zokuxhumana ephelele nabantu abavela kwamanye amazwe besebenzisa esakhelwe text umhumushi. Futhi QQ inikeza okulinganiselwe kwisitoreji ifu ukugcina idatha yomuntu siqu.
Beka of App Box zokusebenza
Saving idatha efwini isitoreji
Amazwana on QQ:
QQ Ahlobene software:
Ukukhulumisana Voice Ithuluzi ezanele zokuxhumana ngezwi on the internet. Isofthiwe ikuvumela ukudala noma ngokwezifiso iseva yakho siqu futhi ukunikeza amalungelo abahloli.
English, Español, 中文, 日本語... Shareaza 2.7.9
English, Afrikaans, Français, Español... TweetDeck 3.8.4
Codecs Isethi kwezinto ezilalelwayo nezibukelwayo codecs kukusiza ukuba ukudlala iningi ifayela takhiwo abezindaba futhi baxhumana yimuphi abadlali.
Office Ithuluzi Elula ukubuka, ukukopisha futhi uprinte lo imibhalo doc noma DOCX takhiwo. Isofthiwe usebenza ngaphandle kokufaka Microsoft Word.
CCleaner 5.26.5937 Standard, Professional futhi Portable